Filed under: ဝတ္ထုတို — 24 Comments
” အချစ် ” ဖြစ်၏……….။”
ကြမ်းပိုးအမတစ်ကောင်၏ အပေါ်အရေခွံကို ခွာပါ… ထို့နောက် ဆား စာပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်းကို မီးကင်ပြီး ၃ ရက်တိတိနေလှန်းပါ….
နေပူ ၆ လတိတိ ပြပါ…။ပုလင်းတစ်လုံးထဲ ထည့်ကာ မြေအောက် ၆ ပေအနက်တွင် ၆ လ ထပ်မြှုပ်ထားပါ…
၆ လကြာလျှင် အဆိုပါ ပုလင်းကို ဖော်ပြီး မိမိပျောက်စေချင်သောနေရာတွင် လိမ်းပါ။ 😛
>အမြဲ ၁ဦးနေတတ်တဲ့ ၀က်ဝံလေးရေ….သနားတယ်
>၃ရောပဲနော် ဟိဟိ 🙂
>ကိုချမ်းရေ တစ်လတိတိ ကိုယ်ရောင်ဖျောက်သွားပြီလား
>ပြန်ပေါ်တဲ့ ဆေးလေးလည်း ဆောင်သွားဦးနော်း)
>ကိုချမ်း ဘယ်သွားမလို့လဲ။ မငုံလဲ မအားတာနဲ့ ပျောက်နေရတယ်။ မဖြူ နေကောင်းတယ် မလား။ မြန်မြန်ပြန်လာနော့။ ပြန်လာရင် မုန့်ဝယ်လာ
>း) ကိုယ်ရောင်ပျောက်သွားခြင်းဆိုလို့ပြေးချလာတာဗျာခလုတ်တွေလဲတိုက်လို့း)ရန်ကုန်ပြန်တာလားဗျး) ရေးထားတာရီရတယ် တပုဒ် ဖတ်ပြီးတယောက်တည်းတခွိးခွိးဖြစ်နေလို့း)
>ကိုယ်ရောင်ဖျောက်ဆေးလာသောက်ဆိုလို့ သောက်တယ်.. နံမည်စာရင်းထဲ မပါရင်ရော သောက်ရမှာလား …(ထီပေါက်ပြီး ထီလက်မှတ်ပျောက်နေသလိုပါပဲလားနော်..) မသေချာလို့ မသောက်ပဲ ပြန်ရကောင်းမလား… အလကား စတာ ..ပြန်လာရင် မုန့်ဝယ်လာနော် …လက်မှတ်မရှိတော့ တန်းလဲစီပြီးပြီဆိုတော့ တိတ်တိတ်လေး ခိုးသောက်ပြီးပြန်သွားပြီ..
>ကျွန်တော် ရန်ကုန်ပြန်မလို့ပါ။ဇနီးသည်က အရင်ပြန်သွားနှင့်တော့ ကျွန်တော်လဲ မှီရာယာဉ်ပျံကြီးကို ဘီးဖက်ပြီး ကိုယ်ရောင်ဖျောက် ယုံတင်လေးပါ။ ပျောက်မသွားပါဘူး။ ပျောက်ဆေးပေးပြီး ဖြေဆေးကျန်သွားလို့။ ဖြေဆေးက ပေါင်ဒါမှုန့်ဘူးကြီးကြီး တစ်ဘူး ကိုယ်ပေါ်လောင်းချရုံလေးတင် တမဟုတ်ခြင်းကို ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။သားသားလေးတစ်ယောက် လာမည့် ၂၁ မှာ လာတော့ပါမယ်။ ဝိုင်းပြီး ဆုတောင်းပေးကြပါဦးဗျာ။
>မောသွားတယ်…. ဆေးနည်းဆီရောက်ဖို့ စောင့်ဖတ်ရတာ… 🙂
>အမလေး သူကိုယ်ရောင်ဖျောက်တာ ဖတ်ရတာလဲ မူးနောက်သွားတာပဲ ကိုရေချမ်းရယ် ဟွန်းးးဝိုင်း ကျောင်းသွားနေလို့ပါနော် မဟုတ်ရင် တစ် တယ် အဲ တစ်ရတယ် ဟွင်းးး သနားလို့ သနားလို့ ဝိုင်းကို ၁ ယူခိုင်းထားတာ ဘာမှတ်လဲ ငွားးးးငွားးးးးးးး
>ဟုတ်ပါ့ဗျာ။ ကဲဝိုင်းရေ တစ်ရတာ ဝက်ဝံကလေးက ကျောင်းသွားနေလို့တဲ့။
>သူ့ကိုယ်ပျောက်ဆေးကလည်း အဆန်းပါလား…တလတော်ဆိုတော့ တယ်ကြာပါ့လား ကိုချမ်းရ… ကိုရေချမ်းခရီးသွားနေသည် လုပ်မလို့လား…သမီးပျိုဆို ခရီးက ပြန်လာပြီးကတည်းက မပေါ်တချက် ပေါ်တချက်… ကိုချမ်းလည်း ပြန်ပေါ်ဆေး တခါတည်း ယူသွားဦး…းဝ)
>ကိုယ်ရောင်ဖျောက်ဆေး အဖော်လွန်သွားတာလားအစ်ကိုရာ အစ်ကိုပါ ပျောက်တော.မယ် . . . ကြက်ဖကတော. ဒီမှာလည်း တစ်ကောင်ရှိတယ် လူကြက်ဖတွေများတော်တော်ဆိုးကြတာဘဲ . . . ပေါက်ကရဆေးနည်းကိုတော.မစမ်းရဲပါဘူးဗျာ တော်ကြာဟော်လိုမန်း ဖြစ်နေမှ ဖြစ်ရင် တုတ်ကောက် :Pကိုရေချမ်း ဇာတ်ကောင်လေး ပြန်လာချိန် မျှော်နေပါမယ်ဗျာ 🙂
>ကိုယ်ပျောက်ဆေးသောက်ချင်တယ်…အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့…း)ဆေးတိုက်ပါ..ချစ်ခင်လေးစားစွာဖြင့် ဖိုးစိန်
>တလနော်… တလပဲ ခွင့်စေ့ရင် ပြန်လာခဲ့ပါ…ဟဲဟဲး)နွေးနေခြည်
>ကိုချမ်းရေ..ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ပြီးရင်လည်း ပြန်လာဖို့ မေ့မနေနဲ့ ..ဇနီးနဲ့ သားသားလေး အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်…ကျန်းမာ ပျော်ရွှင် အဆင်ပြေပါစေ..
>လာပြီ ပေါက်တတ်ကလောက် ကတော့အင်း..ထင်သားပဲ အဲလိုကြော်ငြာပြီးအတုတွေသတိထားပါ..သားသားလေးအတွက်ဆုတောင်းပေးမယ် သားသားလေးအကြောင်းရေးဦးလေ..နော်
>ကိုချမ်းရေ ခွင့်က တစ်လတိတိပဲနော်…ပြန်လာရင် မုန့်ဝယ်ခဲ့..နှင်း
>ဘကြီးချမ်းရေ…တစ်လလုံး မောင်ဝင်းကြည်နဲ့ပျော်ပါစေ။ ဟဲဟဲ
>တကယ့်ကို ဘာများလဲလို့ ဖတ်နေတာ။ ဖတ်ရင်နဲ့ ပြုံးမိပါတယ် ကိုချမ်းလင်းနေရေ …. ရေးလည်း ရေးတတ်ပါတယ်။း)ကိုယ်ယောင်ပျောက်ပြီး ပြန်မပေါ်ပဲ နေအုံးမယ်နော်။ နောက်ကျမှ ပိုစ့်လေးကို လာဖတ်ရလို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ခင်မင်လေးစားလျှက်